စပါးကြိတ်စက်သည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်, ဂျုံ, ပဲပုပ်, ငရုတ်သီးစိမ်း,ပီလောပီနံ, ကောက်ရိုး, စပျစ်နွယ်ပင်, အာလူးခြောက်, အရွက်ကအစာစားသည်. အပြင်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာမှ, ပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်ကိုစက္ကူပျော့ဖတ်အလျင်အမြန်ရိုက်နှက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်, တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးကဲ့သို့စိုစွတ်သောကြိတ်ကြဲကြဲစားသောက်သည့်အစားအစာများကိုလျှော့ချနိုင်သည်, ကန်စွန်းဥ, soybean.This ပြောင်းစက်ကိုကင်ညာသို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်,သွားရန်,အင်ဂိုလာ,တန်ဇန်းနီးယား,ဆူဒန်,Negeria စသည်တို့အထူးသဖြင့်ဒီဇယ်စက်အနှီးစက်စက်သည်အာဖရိကသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်လပ်မှုusefulရိယာတွင်အသုံးပြုနိုင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်သည်.
ပြောင်းစက်စက်သည်အဓိကအားဖြင့် feed hopper မှဖြစ်သည်,ကြိတ်ခွဲထားသောကိုယ်ခန္ဓာ, မော်တာကိုမောင်း, body နှင့် rotor assembly သည် frame ကို နှိပ်၍ နှိပ်နယ်ပေးသောအခန်းကိုဖွဲ့စည်းသည်, rotor ပရိသတျအဓိကအလုပ်လုပ်အစိတ်အပိုင်းများ roomis, ပစ္စည်းကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ဝင်။ complete-When ကြိတ်ခွဲခန်းထဲမှာချိုးဖဲ့၏ပစ္စည်းများ, သွားဂီယာအမှား၏ပတ်လည်နှင့်ပြားချပ်ချပ်အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုသို့ပွား, အလွယ်တကူအမှုန့်နှင့်ပလာစမာပုံသဏ္intoာန်သို့ပစ္စည်းများကျိုးပဲ့, ထို့နောက် centrifugal အင်အားသုံး function ကိုအတွက်လေစီးဆင်းမှု, ဆန်ခါတလျှောက်ကြိတ်သည့်ပစ္စည်းများကိုပြောင်းကြိတ်စက်၏စွန့်ပစ်အပေါက်ထဲသို့ ၀ င်ပါ.
1.ရောင်းရန် Multi အလုပ်လုပ်သောစပါးကြိတ်စက်,ပြောင်းဖူးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်,ဂျုံ, Millet, ပဲနှင့်အခြား grians ကြိတ်,ထို့အပြင်နံ့သာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် .
2.ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိသောပြောင်းဖူးကြိတ်စက် ,တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် maintation အတွက်လွယ်ကူသော.
3.စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးမြင့်မားသောပြောင်းပြောင်းမှုန့်ကြိတ်စက်,ထိပ်တန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးပေးရန်ဒီဇိုင်း. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနှိုင်းမှု, လွယ်ကူအရစ်ကျနှင့်စစ်ဆင်ရေး.
4.မျိုးစုံပါဝါ options များ,ပြောင်းဖူးကြိတ်စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်,ဓာတ်ဆီ,လျှပ်စစ် motro.the စက်၏ဘောင်ကိုလျှပ်စစ်အခြေအနေနှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်.
5.နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏ဒဏ်ငွေဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလုပ်နိုင်ပါတယ်မျက်နှာပြင် mesh.the မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်.
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) ပါဝါ